Igwe ọkụ Chocolate 25L - igwe LST
80kg / h ike
1000 * 745 * 1550mm, ngwugwu size: 1060*560*1750mm
Hazie akara ngosi (nhazi nkeji 1)
Hazie nkwakọ ngwaahịa (nhazi nkeji 1)
Ọnụ ego EXW:
Igwe ọkụ chọkọletị bụ nke pụrụ iche maka bọta koko eke.Mgbe iwechara, ngwaahịa chocolate ga-enwe ezigbo ekpomeekpo ma dị mma maka nchekwa ogologo oge.
Ihe Mba LST-DJ400/LST-DJ600/LST-DJ900/LST-DJ1000/LST-DJ1200
Ike igwe 80kg / h ike
Ọsọ mkpuchi mkpuchi shuga 1000*745*1550mm, ngwugwu size 1060*560*1750mm
Nhazi Hazie logo(min order 1 set)Hazie nkwakọ ngwaahịa(min order 1 set)
Ọnụ ahịa EXW /
● Isi Okwu Mmalite
Igwe ọkụ chọkọletị bụ nke pụrụ iche maka bọta koko eke.Mgbe iwechara, ngwaahịa chocolate ga-enwe ezigbo ekpomeekpo ma dị mma maka nchekwa ogologo oge.A na-eji ya eme ihe na azụmahịa na nke ejiri aka mee chocolate / confectionery, gbakwunye na akụkụ ụfọdụ na ngwaọrụ iji mee ụdị ngwaahịa chocolate dị iche iche dị ka chọkọleti a kpụrụ akpụ, chocolate enrobed, chocolate hollow, truffle grind ngwaahịa wdg.
● Isi ihe
●Microprocsessor nwere pedal ihu igwe dijitalụ iji mee chocolate
● Ihuenyo mmetụ, asụsụ nwere ike họrọ karịa.
● Usoro nchịkwa ọtụtụ.Akpaaka dosing, nwa oge dosing, bọtịnụ na pedal akara dosing, Chocolate eruba bụ mgbanwe.
●Auger screw nwere ike ịtụgharị n'ụzọ dị iche iche, ọrụ bara uru dị ukwuu iji ihicha ma kpochaa nozzle. Mgbe ị na-abata na pedal, chocolate ga-agbapụta.Ka ị na-apụ na pedal ahụ, chọkọleti dị na screw auger ga-abataghachi na mpaghara nchekwa ọkụ.
● Edobere ọnọdụ okpomọkụ maka usoro dị iche iche.eg 55℃ maka agbaze, 38℃ maka ịchekwa na ije ozi.Mgbe ahụ igwe ga-akpaghị aka idobe okpomọkụ na 55 ℃ mgbe agbaze.Mgbe agbazechara nke ọma, sistemu kpo oku ga-akwụsị ịrụ ọrụ ruo mgbe okpomọkụ dara na 38 ℃ ma jide ya na 38 ℃ maka ijere ndị ahịa ozi.
Nke gara aga: Mkpuchi chocolate na pan
Osote: 5.5L igwe na-ekesa chocolate
akpaka chocolate tempering igwe
igwe nhazi chocolate
igwe na-ekpo ọkụ chocolate
Chocolate Tempering Machine nwere 25kg
5.5L igwe na-ekesa chocolate